ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုသုံးပြီးမေးလ်ကိုဘယ်လိုဆယ်တင်နိုင်မလဲ။ ဒီပြproblemနာကိုဘယ်သူဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာလဲ။ အဖြေကိုအစာမကျွေးဘူး ဒီလီနာအတွက်လင့်များကျန် ဂိမ်းများသို့လှဲချ။ သင်၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူလိုလျှင် Enrages, ...
Mail.ru အထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကူညီပေးပါ။ ငါ support service မှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားသော်လည်းသူတို့သည်သင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်နည်းပါးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ငါလုပ်နိုင်တယ်…
avatar တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွင်သက်သေခံခြင်းကိုမည်သို့ခန့်ထားမည်နည်း။ ! ရွှေအတွက် Hurray၊ မှတ်ချက် ၄ ခုရေးပါ၊ masha သို့သို့မဟုတ် sachet သို့သွားပါ၊ f4 ကို နှိပ်၍ သင်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုရွေးရန် ၄ ရွှေ Hurray ကိုရွေး။ ရေးပါ ...
ငွေလွှဲနံပါတ်ကဘာလဲ။ ငါဘယ်မှာရှာရမလဲ။ မင်္ဂလာပါ၊ ငွေပေးချေမှုကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိသည့်နံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ Yandex- ပိုက်ဆံနှင့်အတူကဒ်သို့ငွေလွှဲခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံကျန်တော့ပေမယ့်ကဒ်ကိုမရောက်လာဘူး။
“ Woe from Wit” အလုပ်၏ဇာတ်ကောင် ၂၆ ခုလုံးစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
A. Griboyedov ရဲ့ "Woe from Wit" အလုပ်မှာစာလုံး ၂၆ ခုလုံးရဲ့စာရင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ Wit မှ ၀ မ်းနည်းခြင်းအခန်းငယ် ၄ ခုပါသောဟာသဇာတ်ကား ACT: ဆိုဗီယက်နိုင်ငံ၊ ဆိုဖီယာမှပေါလ် Afanasyevich Famusov ...
ကျွန်တော့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ သင်သည်ပရိုဖိုင်းကိုသာပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာအီးမေးလ်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ အသစ်တခုကိုဖန်တီးပါ၊ စိတ်မပူပါနဲ့) ဘာလိပ်စာမှမရှိပါဘူး။ မေးလ်ဖြစ်ပါကအခြားစာတိုက်ပုံးတစ်ခုစတင်ပါ။ 🙂 ...
ဖျက်ထားတဲ့အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နည်း။ # 1 ပယ်ဖျက်ထားသောစာများအားမေးလ်ထဲတွင်မထည့်မီ၊ သတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သို့ဖျက်ပစ်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအတိအကျမှတ်သားထားရန်လိုအပ်သည်။ ဒီတော့ဒေတာထိုကဲ့သို့သောဖိုလ်ဒါ၌ရှိ၏လျှင်, ...
ဖောင့်စာလုံးမည်းကိုဘယ်လိုထားရမလဲ။ HTML tag များအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကိုငါမည်သို့သုံးစွဲရမည်ကိုနားမလည်ပါ။ hmm aaaaa စာလုံးစောင်းဖြင့်စာလုံးစောင်းသင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်စာသားကိုဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်ထင်ရှားစေသည်။ tags များနှင့်စာသားအကြား ...
စာတစ်စောင်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပို့လို့ရလား အဆင့် ၁: အကျွမ်းတဝင်မရှိသောနေရာတစ်ခုသို့သွားပါ။ ဥပမာ၊ အင်တာနက်ကဖေးအဆင့် ၂။ စာတစ်စောင်ပို့ခြင်းနည်းလမ်း ၁။ အမည်မသိအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန်စာတိုက်ပုံးအသစ်ကိုတစ်နေရာရာ၊
မည်သည့်နမူနာဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်သည်မြောက်ဖျားတွင်အလုပ်အကိုင်နှင့်တူကြောင်းအဖြေသည်ခေတ်နောက်ကျနေသည်။ North -302-n Irina အတွက်ပုံစံအသစ်ဤအချက်အလက်သည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ pliz အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်တစ်ခု ...
အသုံးပြုသူအကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုသို့သတင်းပို့သည့်သတင်းအချက်အလက်ပါသည့်အကောင့်မှတ်တမ်းတစ်ခု။ နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ပြောသောစကားများအနေနှင့်ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများအကောင့်နှင့်အကောင့်ကို ... မှသုံးနိုင်သည်။
အဆက်အသွယ်ရှိအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်။ စာမျက်နှာကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။ e-mail အဘယ်အရာကိုမျှဖြင့်။ စတင်ရန်လော့ဂ်အင်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထည့်ရန်အကွက်များအောက်ရှိအဆက်အသွယ်ရှိကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အဓိကစာမျက်နှာကိုသွားပါ။
mail.ru တွင်စာတိုက်ပုံးတစ်ခုအားမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်းအသုံးပြုသူသည်မိမိ၏စာတိုက်ပုံးကိုမိမိ၏စက်မှလွတ်လပ်စွာပြန်လည်ရယူရမည်။ သဲလွန်စတွေပေးနိုင်တယ် သင့်ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့် ၀ င်ရောက်မှုကိုပြန်လည်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါကအောက်ပါအကြံပေးချက်ကိုဖတ်ပါ - http: //otvet.mail.ru/question/172719793 မေးလ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း ...
trolling ဆိုတာဘာလဲ ၎င်းသည် "အဖြေများ" ပေါ်ရှိစာများ၏ ၉၀% ဖြစ်သည်။ Trolling သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရိုင်းစိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဝေါဟာရများတွင် troll ဆိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရိုင်းစိုင်းသောသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်သောမက်ဆေ့ခ်ျများတင်ထားသူ၊
ပျက်စီးခြင်းဆိုတာဘာလဲ သဘာဝနှင့်အချိန်ဥပဒေများအရပြင်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အရာဝတ္ထု၏လက္ခဏာများအားအချိန်နှင့်အမျှပျက်စီးခြင်း၊ နောက်ပြန်လှုပ်ရှားမှု၊ တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းမှု၊ ကျဆင်းခြင်း၊ အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း…
Avatar ကိုရက် ၁၀၀ ၀ င်ရောက်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ငါထိတ်လန့်နေသူများထဲမှမည်သည့်ဆုကိုရရှိမည်နည်း။ ရွှေကိုအခမဲ့ရယူရန်အစီအစဉ်ရှိခဲ့သည်။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် လုံးဝခက်ခဲသည်မဟုတ်! ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆုကိုလည်းကောင်းလှ၏ ...
တစ်နေ့လုံးယင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအနိမ့်အမြင့်ဖြင့်ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ဘက်ပခုံးဓါးအောက်တွင်နာကျင်မှုရှိသောရောဂါများ - အစာအိမ်အနာ၏အဓိကလက္ခဏာမှာနာကျင်မှုဖြစ်သည်။
mail.ru ကိုသင်၏ desktop ပေါ်ရှိ home page တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးနည်း Hello! Mail.Ru ကိုသင်၏ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်စေပါ။ သင်၏စာများကိုအလျင်အမြန်ဖတ်ပြီးပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ရန်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
mail.ru တွင်မေးခွန်းတစ်ခုမည်သို့မေးရမည်နည်းဤတွင် - သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးမေးခွန်းကိုမေးမြန်းပြီးဖြစ်သည်)) စီမံကိန်း၏အပြာရောင်ခေါင်းစီးတွင်ရှိသော“ ask” ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်ပါ။ ) ထို့နောက်ခေါင်းစဉ်ဘားတွင်ချက်ချင်းရေးပါ။
54 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,884 စက္ကန့်ကျော် Generate ။